သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): အထုပ်ကလေး ဖြေကြည့်ရာဝယ် မှ အဆက်
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 13:44
ထင်လိုက်သား ချုပ်ထေး လို့..။ ဒါပေမယ့်လည်း ဇာတ်အိမ်က ဘယ်မှာ ယူထားမှန်းမသိလို့ ဆက်သုံးဆောင်တော့ အထင်မှန်သွားလေသည် ..။
Wednesday,4May 2011 at 17:23:00 BST
ပထမတော့ အဲဒီဘက် တော်တော်ပူလှချည်လားလို့ထင်နေတာ။
ဒီကလည်း အမှတ်မရှိဘူးလင့်ပေးထားတာ လိုက်မိတယ်။
မမိုက်ပါဘူး။ ချုပ်ထေး ဖြစ်နေတယ်။
Thursday,5May 2011 at 02:43:00 BST
လူဆိုး . . . ဒါကြောင့် အနံ့တွေ မကောင်းတာ . .
Thursday,5May 2011 at 03:30:00 BST
ဟားဟား ဒါကြောင့်ထင်ပါတယ် အနံ တခုခု ရလိုက်ပါတယ်လို့း))))
Thursday,5May 2011 at 05:29:00 BST
သကြီး ကတော့ လုပ်ပြီ
Thursday,5May 2011 at 10:57:00 BST
တော်သေးတယ် ထမင်းစားပြီးမှ ဖတ်မိလို့ !!!
Thursday,5May 2011 at 15:22:00 BST
:D.. တို့သူဂျီးလည်း ဒီထဲကကို တက်တော့ဘူး....
Friday,6May 2011 at 05:18:00 BST
သဘောကျလို့ အော်ပြီးတော့ကို ရီလိုက်တယ်..
တခါတလေ အန္တရာယ်ဆိုတာ လွယ်ထားလို့မရတာမျိုးလည်းရှိတတ်လို့...။
Friday,6May 2011 at 10:26:00 BST
ဟုတ်တယ် သူကြီးရေ မီးမလာရင် အဲဒီဒုက္ခ က အဆိုးဆုံး ပဲ :P
Saturday,7May 2011 at 07:40:00 BST
တဂျီး add ထားတယ်နော်..
အစုတ်ပလုပ်....ဒီမှာ birthday လုပ်နေရင်း သူ့
အထုပ်ကို ဖြည်ကြည့်ပါတယ် ဟွန်း....
ဝေါ့အော့ ဖွီး တောက်ကတောက်!!!
ဟင့် ရက်စက်ပါပေ့ တယ်ဂျီးရယ်
တူညားရန်ကုန်ရောက်တုန်းလေး ဘလော့လည် အထုပ် ဖြေမိပါတယ် အခုတော့ ချေးထုပ်နဲ့ငြားပါရောလား ဟင့်
Monday, 16 May 2011 at 08:22:00 BST